Eo amin’ny fomba fikapohana ny atody sy siramamy no mahatonga ity mofo ity hitombo na tsia koa mila kapohina mafy tsara tsy ankijanona izy raha te ahazo vokatra tsara raha toa ka tsy manana "batteur". Raha hanamboarana "génoise roulé" kosa dia arakaraky ny haben'ny mofo tiana ho azo no hisafidianana ny lasitra ampiasaina. Asiana "papier sulfurisé" hatrany ao ambaniny mba ahamora ny fanesorana azy tsy ho simba.
• Siramamy 120g
• Lafarinina 120g
• Dibera 50g
1. Omano avokoa ny akora rehetra ilaina
2. Hafanao eo amin’ny 180°C ny lafaoro
3. Afangaro anaty vilia mahazaka hafanana ny siramamy sy atody ary kapohana ireo.
4. Atao eo ambony vilany misy rano mamay sady kapohana ihany. Tsara kokoa raha apetraka ambony afo malefaka io vilany misy rano io.
5. Tokony hitombo avo roa heny ny habetsak’io atody sy siramamy io vao hajanona ny fikapohana azy. Lasa fotsifotsy be ihany koa izy.
6. Tatavanina eo amboniny eo ny lafarinina.
7. Haroina tsara amin’ny “spatule”
8. Asiana dibera ny lasitra dia araraka ao io paty io
9. Ampidirina anaty lafaoro amin’izay ka andrasana eo amin’ny 30min eo.
10. Hamantarana na masaka na tsia ny mofo dia tsindromina amin’ny antsy eo afovoany ka rehefa tsy misy paty manaraka io antsy io dia vita izy izay.